Nezvedu - Beijing Convista Kuyerera Kudzora Zvishandiso Co., Ltd.
CONVISTA yakatsaurirwa kutsvagisa uye nekupa ese marudzi ese kuyerera kudzora michina senge Mavharuvhu, Valve actuation & Kudzora, Pombi uye zvimwe zvakabatana zvikamu & zvishandiso senge Flanges & Fittings, Strainers & Mafirita, Mapfundo, Kuyerera Mamita, Skids, Kukanda & nokuchengetedza zvinhu etc.
CONVISTA inovimba nehunyanzvi tekinoroji uye basa rakanakisa rekupa yakachengeteka, inopa simba-uye inodzivirira nharaunda kuyerera kudzora mhinduro. Mhinduro iyi inogona kuvapa maValves, Valve actuation & Controls, Mapombi ezvekuomesesa mafomu pane Oiri & Gasi Kutumira Pombi, Kuchenesa & Petrochemical, Chemical, Coal Chemical, Simba Rakajairika, Mining & Minerals, Kuparadzaniswa Kwemhepo, Kuvaka, Dring Mvura & Sewage Mvura uye Chikafu & zvinodhaka nezvimwewo huwandu hwakazara hwemasevhisi anotenderera kubva kune ino inotariswa nevatengi portfolio.
CONVISTA ndiye anotungamira wepasi rese mutengesi we Mavharuvhu, Valve actuation & Kudzora, Pumps uye zvimwe zvinhu zvinoenderana nenzvimbo dzinotevera dzekushandisa
Mvura ine hukasha uye inoputika
Mvura yakachena kana yakasviba
Zvinokanganisa uye zvinopisa mvura
Fluid / yakasimba masanganiswa uye slurries
Sustainability & Basa
Zviitiko zvebhizimusi zveCONVISTA uye basa rezvemagariro zvakanangana nekuwana rakasimba, rekuchengetedza magetsi uye rakachengetedza zvakatipoteredza rinovimbisa kubatsirwa kwenguva refu kwezvakatipoteredza nevanhu.
CONVISTA inotsigira zvinangwa zveKyoto Protocol uye inoisa kukosha kukuru pakushandisa kwakakwana kwesimba kwezvose zvigadzirwa uye matekinoroji. Uye zvakare, maitiro edu ebasa uye nharaunda yekushandira zvakagadzirirwa kuda simba shoma uye sevashoma mbishi zvigadzirwa sezvinobvira.
Hutano pabasa nekuchengeteka kwevashandi
Kuti uve nechokwadi chekuchengetedzeka kwakanyanya munzvimbo yebasa, CONVISTA yakatsanangura nhungamiro dzayo dzeEHS (Hutano hweKuchengetedzwa uye Kuchengetedzwa) uku ichisanganawo nematanho emunyika neepasi rose.
Kuve mutengesi akavimbika pane inoyerera yekudzora michina yevashandisi vepasirese
Yakachengeteka, inopa simba-uye inodzivirira nharaunda kuyerera kudzora mhinduro nyanzvi
Nguva dzose simbirira kugutsa vatengi nebasa rechokwadi, rakaomarara, rehunyanzvi uye rinoshanda
Gara uchitevedzera kuomarara kuongororwa kwevatengesi, kuitira chinangwa chekudyidzana & kuhwina-kuhwina kugarisana
Gara uchimanikidza kukudziridza timu ine tarenda nechido, dambudziko uye kushuvira
Mushandi ndiye hwaro hwedu uye musimboti. Convista inoenderana nemushandi wedu - vanhu ava vanoita kukosha kweConvista, kuteedzera kuchengetedzeka kwechigadzirwa uye kuvimbika, uye hunhu, kutendeseka, pamwe nekuremekedza kukosha kweumwe neumwe, zuva nezuva. Mushandi ndiro dombo rinouya reConvista, panguva imwechete, Convista zvakare akazvipira kuita yega yeaya mapundutso ega. Convista inivhesitimendi pane yazvino tekinoroji, maitiro pamwe nemanejimendi maturusi anoita kuti yega yemumwe munhu atambe matarenda avo zvizere anowedzera.
Basa Rekuchengetedza, Mushandi Akagwinya
Convista aneta kuti ave nechokwadi chekuti nzvimbo yebasa yakachengeteka uye hutano. Isu tinoramba tichivandudza gore rimwe nerimwe mune izvi chinhu. Isu tinokoshesa kuchengetedzeka kwevashandi musangano redu tsika, isu tichishanda pamwe nemushandi kune yakachengeteka uye ine hutano nharaunda, isu tinofunga zvakachengeteka uye hutano mune yega yega chiitiko chedu, zvichibva pane izvo, isu tinoramba tichishanda uye tichiita chokwadi chekuti tinonzwisisa uye tine basa kubata zvakasiyana njodzi.
Isu tinosimbisa nekuvandudza yakachengeteka uye yehutano manejimendi sisitimu, yakanaka yekuchengetedza chengetedzo nzvimbo, zvishandiso uye zvenguva dzose kuongororwa kwehutano zvese zvakasimbisa nzvimbo yekushanda yakachengeteka uye yevashandi hutano. Convista yakagadzwa yehutano uye yekuchengetedza manejimendi system, nharaunda manejimendi sisitimu, ndeye chinangwa chekupa mushandi wedu nzvimbo yakachengeteka yekushanda.
Vashandi Kudzidziswa uye Kubudirira Kukurudzira uye Kutsigira Vashandi Kuchera Izvo Zvazvinogona
Isu tinogara tichizvipira kupa chiyero chakazara kumatarenda uye nekushandisa zvakanakisa zvese. Isu tinoita wega wega mushandi yakatarwa chirongwa chekuvandudza basa zvichienderana nemamiriro avo ezvinhu. Isu tinopa hunyanzvi hwekudzidzisa kune vemberi mushandi, uye nekupa manejimendi kudzidziswa kune manejimendi, kupa master degree kudzidza kune tekinoroji vashandi etc. Izvi zvese zvinobatsira mumwe nemumwe mudonzvo kukura kwakazara munguva pfupi.
Vashandi Vanozivikanwa uye Vakarumbidzwa
Gore rega rega isu tinokoshesa hunyanzvi hwekuita basa uye neanotungamira basa repamberi mushandi sehunyanzvi, uye nekupa
bhonasi kune yega yega mwedzi wega uye gore rega. Chii chimwe, isu tinokoshesa mhando yemhando yepamusoro uye
zvishandiso zvinochengetedza zvakasarudzika uye zvinopa bhonasi kwavari.
Yedu yekukura sirogani ndeye bhizinesi kutanga pamwe chete, govana michero.
Isu tinofunga, Convista akafanana semhuri pane mubatanidzwa, mushandi wedu inhengo dzemhuri, iri kumhanya neyakaenzana kukosha uye bhizinesi chinangwa. Sangana nemushandi kukosha, mubatanidzwa wechikwata kukosha uye gadzira inowanda inosimudzira uye yekusimudzira imba kune mushandi. Mushandi akamira pamwe nekambani uye vanogovana michero yekutanga.
Gore rega rega Convista anopemberera Mutambo weChirimo, yekutenda yega yega yemupiro wenhengo.